Super Cash anzima | Free Spins No Deposit Required | CoinFalls Casino
Enoba Wena fan enkulu yeMali anzima ukusuka IWG, uya ungathanda lo mdlalo entsha kubo njengoko Super Cash anzima inikeza amabhaso ezinkulu kwaye ngaphezu kwemali anzima. le osebenzisa free akukho dipozithi efunekayo umdlalo uza kuwe amabhaso ezinomdla kakhulu kwaye imithwalo fun.
Malunga umbhekisi phambili Kingdom of Wealth
IWG i umbhekisi phambili kwaye umniki online, win ivideo imidlalo nangoko iLotto abadumileyo nakwiinkampani ukungcakaza. Le nkampani yenza imidlalo kakhulu azibandakanya kunye umdla kunye nale osebenzisa free akukho dipozithi efunekayo Umdlalo ngomnye wabo.
le osebenzisa free akukho dipozithi efunekayo mdlalo udlalwa usebenzisa incwadi esongwayo kumadayisi endaweni ekwazi yesiqhelo kunye eluphendula. Phambi kokuba uqale besaphula iibhloko, ufuna ukucwangcisa ukubheja kwakho. Cwangcisa ukubheja kwakho nemali efunekayo ngokucofa ku (+) kwaye (-) amaqhosha. Xa usete ukubheja, nqakraza kwi DLALA ukuze uqalise. Uya kufumana 8 imiqulu a idayisi umbala, kusiqengqela nje le idayisi ukuba iveze umbala. I ibhloko ngombala omnye kunye nayiphi ibloko abakufutshane umbala ofanayo bayibethe kule ndawo umdlalo. Le theyibhile Ibhaso iqulethe imiqolo kwiindawo zokubeka ngemibala eyahlukileyo. Inani iibhloko baphula kule ndawo umdlalo uza isigqibo sokuba kwiindawo zokubeka ezininzi loo umbala zizaliswa etafileni umvuzo. Ngoko ke, umzekelo, ukuba idala 4 iibhloko obomvu kuloo ndawo umdlalo, 4 kwiindawo zokubeka kumqolo ebomvu iya kuzaliswa kwi table umvuzo. Kwakhona uya kufumana ithuba ukuqokelela iimpawu ezingaphezulu ibhingo ekhawulezileyo njengoko uhambe ngayo besaphula iibhloko.
Ezi mpawu extra kule osebenzisa free akukho dipozithi efunekayo mdlalo:
Xa smash ibhloko ethe Roll owongezelelekileyo iboniswe kuyo, ufumana incwadi esongwayo engaphezulu kumadayisi.
Xa smash ibhloko ene-mali ibhaso iboniswe kuyo, ufumana ukuba imali emvuzweni.
Xa smash ibhloko eye umdlalo mini iboniswe kuyo, ufumana ukudlala i mini-umdlalo.
Xa uzalise i yonke i ukrozo umbala phezu kwetafile emvuzweni, ufumana umvuzo ukuboniswa leyo umqolo.
kuyo mkhulu ngokuba abo sele wadlala Cash anzima, kodwa iya enanditshwa wabaqalayo ngokulinganayo. I RTP le free esijikelezayo akukho umdlalo idipozithi efunekayo malunga 88.25%.